Masoivohon’i Monaco Mandray an-tanana ny ankizy ôtista Malagasy
Anisan`ny mahazo vahana eto Madagasikara ny otisma (autisme). Tamin`ity taona ity, ankizy miisa 5 ahiana ho otista no nahazo fitiliana (bilan) maimaimpoana tany Toamasina.
Nisy ihany koa ny fanofanana maimaimpoana momba ny otisma, nomena ho an’ireo tompon’andraikitry ny sekoly, ireo ivontoerana mandray ankizy sy ireo mpiasan’ny fahasalamana sasany. Nisy ny fanentanana natao tamin’ny mponina, momba ny otisma hatrany. Vokatry ny fiaraha-miasa iarahana amin’ny masoivohon’i Monaco eto amintsika, izay niara-niasa tamin’ny fikambanana “Autisme Madagascar” hatramin’ny taona 2016. Isan-taona, misitraka 3 500 000 ariary ny fikambanana ka nahafahana nanatontosa lahasa maro, izay mifandraika amin’ny fandraisana an-tanana an’ireo ankizy otista eto Madagasikara. Tsiahivina fa ny taona 2016, ankizy ahiana ho otista maherin’ny 75 isa no nozahan’ny (diagnostique) manampahaizana isan-tsokajiny avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ny taona 2017 dia anisan’ny nampiasana an’izany vola fanampiana izany ny fanofanana an’ireo mpikambana mpilatsaka an-tsitrapo ao anatin’ny Autisme Madagascar sy ny fiarahana midinika tamin’ireo ray aman-dreny manan-janaka otista, tany Antsirabe sy Moramanga. Faritra 7 no ahitana ny Autisme Madagascar ary antenain’izy ireo ny hitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ny masoivohon’i Monaco hatrany, amin’iny taona 2019 ho avy iny. Miteraka olana ho an’ireo ray aman-dreny manana zaza otista ny fitaizana, indrindra raha eo anivon’ny fiarahamonina. Voailika amin’ny fifandraisana eo amin’ny fiarahamonina ireo zaza manana kilema satria tsy misy ankizy feno mety hiara-kilalao amin’izy ireo.